Shiinaha YF-T10 Faa'iido Weyn oo Balaaran oo ay kujiraan keydadka keydka iyo soosaarayaasha soo saaraha iyo qeybiye Yifan
YF-T10 Waxyeello weyn oo Qurxiyo ah oo leh keydad keyd ah iyo Khaanado
Alaabada jiifka ee Talyaanigu ka kooban yahay, waa uruurin rogrogmi karta, tayo sare leh oo ka mid ah armaajooyinka sariirta dhinaceeda, sanduuqyada khaanadaha iyo miisaska labiska oo ku jira xulasho ballaaran oo kala duwan.
ASTAAMAHA Kaydinta, Khaanadaha, Muraayadda la saari karo
Maaddi Muraayad sare oo loo yaqaan 'MDF gloss + + lugaha birta ah ee birta ah
QIIMEYNTA SHARCIGA 1200 * 500 * 750mm
Waxyaalahan qurxoon ee qurxinta quruxda badani waxay leeyihiin naqshad qurux badan oo leh gacmo gaar ah khaanadaha. Midabka beige ayaa u ekaanaya mid nadiif ah oo waasac ah. Wax aan waxba tarayn ayaa leh afar khaanadood. Qalabka waxaa ku jira saxar, muraayad, iyo wax aan waxba tarayn.
Miiska labiska Marxaladda wuxuu ka kooban yahay 3 feeraha feedhaha khaanadaha oo dusha sare ka ah 7cm, salka iyo dhinac dhinac ah. Labada sare iyo xabadkaba waxaa lagu heli karaa dhowr ballac, laakiin hal dherer oo keliya ayaa jira.
Kaydinta Weyn: 4 khaanad ayaa ku siinaya meel aad ku keydiso oo kugu habboon oo aad ku abaabuli karto waxyaabahaaga dahabka ah, waxyaabaha timaha lagu dhejiyo, ciddiyaha, qalabka daryeelka timaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
Isticmaal badan: Uma adeegayso oo kaliya sidii miiska labiska si loo helo meel raaxo leh oo lagu sameeyo timahaaga iyo qurxinta, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa daraasad ama miiska xafiiska marka muraayadda la dhaqaajinayo.
Miiskan labbiska aan micnaha lahayn waa hadiyad fantastik ah gabdhaha. Muuqaal qurux badan oo qurux badan leh naqshad xardhan ayaa noqon doona qurxinta ugu fiican. Miis ballaaran iyo 4 khaanad qoto dheer ayaa bixiya meel ballaaran oo lagu kaydiyo si ay kaaga caawiso abaabulka dahabka, qurxinta iyo qalabka. Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee miiska labiska miiska ayaa ah inuu leeyahay muraayad wareeg ah oo 360 ° ah oo bixinaysa aragti buuxda sidaa darteed waxaad hubin kartaa inaad dhinac kasta uga muuqato mid weyn. Waxaad u isticmaali kartaa sida miiska labiska iyo miiska wax lagu qoro.
QIIMEYNTA SHARCIGA ： 1200 * 500 * 750mm
STYLE: Raaxo & Naqshad Casri ah oo casri ah, muuqaal cadaan raaxo leh iyo dhisme casri ah oo casri ah, Qaab guri oo caadi ah oo iftiiminaya dhinaca kale ee noloshaada
WAXYAALAHA: Caddaan + Daabacaadda Dahabka Lugaha birta ahama ee Qalabka: E1 guddiga walxaha fasalka + Biraha meertada birta dahaarka leh
Si fudud loo soo ururiyo, aalado iyo tilmaamo ayaa lagu daray.
Hore: YF-T8 geeska ay ka buuxaan miiska labiska raaxada
Xiga: YF-T11 maro jilicsan oo jilicsan
Miiska labiska oo leh Muraayad iyo Saxaro
Shaxda Labiska Dhaldhalaalka Sare
Shaxda Dharka Hotel
Jadwalka Labiska ee Muraayadda leh Khaanado
Shaxda Dharka Yar
Muraayadda YF-T15 dhalaalka sare Muraayadda Isku-laaban-Faan
Miis qurxiyo oo fudud oo qurux badan
YF-T7 Qurxinta Waxtarka Shaashadda Muraayadda weyn & Ca ...
Miiska miiska labiska Mini-yar
Miiska Qurxinta lugaha Oak